Google Chrome ga-akwụsị iji ụda na-akpaghị aka na-akpọ ọdịnaya | Akụkọ akụrụngwa
Ozi oma diri anyi nile ji Google Chrome dị ka ihe nchọgharị anyị maka ụbọchị taa, na n'ime awa ikpeazụ, onye ọchụchọ ahụ ekwupụtala na site n'afọ ọzọ ya ihe nchọgharị weebụ ya ga-akpaghị aka kwụsị ịkpọ ọdịnaya na ụda. Nke a bụ ihe kpasuru ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na nke nnukwu ọchụchọ ahụ mechara kpebie idozi ya.
Google na-achọkarị, karịa ihe niile, na ndị ọrụ nwere ahụ iru ala na ngwaahịa ya, yana enweghị obi abụọ, atụmatụ ndị a nke Google Chrome enweghị mmasị na onye ọ bụla. Ma ọ bụ na ka oge na-aga, enwere ọdịnaya na-aba ụba na ụda, ọkachasị mgbasa ozi, nke mebiri n'oge anyị ruo ụbọchị n'oge ọ bụla, na-abụkarị na olu zuru oke.
Njirimara ohuru nke ga - ekwe ka nhọrọ gbanyụọ akụrụngwa akpaka nke ọdịnaya na ụda, ga - amalite ịdị na Chrome 63, nke dị ka ihe niile na-egosi ga-adaba n'ahịa na-esote Jenụwarị 2018. Ọzọkwa, otu n'ime nnukwu uru ọ ga-enye anyị bụ na anyị nwere ike iwepu ọdịnaya nke ụfọdụ ibe weebụ ma debe ya na ndị ọzọ.
Mgbe ahụ Google 64 ga-abata nke ụdị ọdịnaya a agaghị eji ụda rụọ ọrụ ọ gwụla ma ịhọrọ, na-ahọpụta weebụsaịtị ma ọ bụ weebụsaịtị. N'ezie, maka ụdị nke ihe nchọgharị a na-ewu ewu iji ruo n'ahịa, ọ ka nwere ogologo oge ịga.
Kedu ihe ị chere gbasara atụmatụ ọhụrụ anyị ga-enwe na Google Chrome n'oge na-adịghị anya ma nke ahụ ga-enyere anyị aka gbanyụọ ihe ọkpụkpọ nke ọdịnaya na ụda?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Google Chrome ga-akwụsị ịkpọ ọdịnaya na ụda na-akpaghị aka
Na October 4, a na-enye Google Pixel 2 na Pixel XL 2